स्वास्थ्यमा सकारात्मक क्रान्ति ल्याएका कारण नर्भिकले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउन सफल भयो : मनिष खेम्का
२०७६ मङ्सिर २४ मंगलबार १९:१२:०० प्रकाशित
नर्भिक अस्पतालले हालै मलेसियाको क्लालालम्पुरमा अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको एक निकाय वर्ल्ड कन्फडेरेसन अफ बिजिनेसेस (वर्ल्डकब)द्वारा सफलताको शिखर नामक अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्‍यो। सन् १९९३ देखि सेवा दिन सुरु गरेको नर्भिक अस्पताल हरेक वर्ष फरक विधामा अवार्ड पाउन सफल छ। अवार्ड र अस्पतालको सेवा सुविधाबारे नर्भिकको अभिभावक संस्था बिएलसी होल्डिङ प्रालिका कार्यकारी निर्देशक मनिष खेम्कासँग स्वास्थ्यखबरका समर्पण श्रीले गरेको कुराकानीः
हालै अस्पताललाई मलेसियामा वर्ल्डकब नामक संस्थाद्वारा ‘सफलताको शिखर’ अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्रदान गरियो। यो कस्तो अवार्ड हो?
यो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हो। यस अवार्डका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धेरै संस्था छानिन्छन्। ती छनोटमा परेका संस्थाहरूको अध्ययन वर्ल्डकब नामक संस्थाले गर्छ। सेवाग्राहीबाट ती संस्थाको सेवाबारे जानकारी लिइन्छ। ती संस्थाको व्यवस्थापन पक्षबारे बुझिन्छन्। सिस्टम, संस्थाका स्टाफ र काम गर्ने शैलीबारे अध्ययन हुन्छ। त्यसैमार्फत नोमिनेसनमा परेका संस्थाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन्छ।
र्‍याङ्किङ अनुसार जसले टप नम्बर ल्याउँछ। सोही संस्थाले यो अवार्ड पाउँछ। यो यो अवार्ड एउटा क्षेत्रमा एउटा संस्थालाई दिन्छ। जस्तै पिक अफ सक्केस अवार्डभित्र पनि धेरै क्याटेगोरी हुन्छन्।
यो अवार्ड पाउन संस्थाले विगतमा पनि सम्मान पाएको हुनुपर्ने रहेछ नि?
हो। अघिल्लो वर्ष पनि हामीले अवार्ड पाएका थियौं। फरक क्याटेगोरीमा। यसपालि अर्कोमा भयौं। हरेक साल हामीले अवार्ड पाइरहेका छौं।
नर्भिकले अवार्ड पाउनुको पछाडि दाबी गर्ने कुराहरू के–के छन् त?
नर्भिकले २६ वर्षको इतिहास बोकेको छ। जुन बेला नेपालमा हेल्थ केयरको सुरुवात गरिएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक किसिमको क्रान्ति नै जस्तो थियो। निजी संस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी हात हाल्न कठिन थियो। किनकि, यो आज लगानी गरेर भोलि कमाउने व्यवसाय होइन।
१०औं वर्षसम्म नर्भिकले नोक्सान व्यहोरेर बस्यो। १४ वर्षसम्म त नर्भिक नोक्सानमा नै चल्यो। त्यसपछि मात्र विस्तारै नाफामा आयो। यो यस्तो बिजनेस हो कि जसमा अरु हात हाल्नै डराउँथे।
लगानी सधैं गरिराख्नुपर्ने। नयाँ प्रविधि र उपकरण नियमितजसो खरिद गरिरहनुपर्ने। जब नर्भिकले आँट गरेर पहिलो पाइला चाल्यो, तब अरुले पनि पछ्याए। नेपाल र नेपालीको लागि यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यो बेला नयाँ टेक्नोलोजी सर्वप्रथम नर्भिकले नै भित्र्याएको हो। अहिले नर्भिकसँग धेरै ट्यालेन्टहरू छन्। यदि नर्भिक नभइदिएको भए यी धेरै जनशक्ति बाहिर गइसक्थे होला। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। पछि स्थापित भएका अस्पतालले यहाँका जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाए।
राम्रो र विश्वसनीय उपचारका लागि नेपाली बाहिरी देश जानुपर्थ्यो। पछि सस्तोमै नेपालमा उपचार गर्नसक्ने अवस्था नर्भिकले बनायो। नेपालको दक्ष जनशक्ति देश बाहिर जान्थ्यो। त्यो पनि नर्भिकले रोक्यो। थप तालिमको व्यवस्था र जनशक्तिको उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा नर्भिकको हात छ।
यो विगतको कुरा भयो। अहिले पनि ७० हजार बिरामीलाई हामी नर्भिकमा उपचार गर्छौं। हामीले एउटा ठूलो समुदायलाई सेवा दिइरहेका छौं। हाम्रो गुणस्तर त्यही किसिमको छ। नेपालकै बेस्ट डाक्टरहरू उपचारमा छन्। कुनै पनि डिपार्टको कुरा गरौं। सबैमा बेस्ट छन्। नेपालको क्रिटिकल केयरको लागि त नर्भिक पहिलो नै हो। अन्य अस्पतालमा भएन भने अन्तिम विकल्प नर्भिक नै हो। यी सबै कुरालाई मुल्यांकन गरेर नै अवार्ड दिइएको हो भन्ने लाग्छ।
नर्भिकको विश्वसनीयता पनि मानिसमा बढेको भनिन्छ। अस्पताललाई यतिको विश्वसनीयता दिलाउनको लागि कति समय लाग्यो?
लामो यात्रा हो यो। हरेक दिन हाम्रो प्रतिबद्धता र स्पिडले नै यो विश्वास दिलायौं। हरेक दिन हामीले थप राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले काम गर्‍यौं। योजना पनि त्यही हिसाबले बनायौं। काम गर्दै गएपछि विश्वास बढ्दै जाँदो रहेछ। बिरामीलाई दिएको गुणस्तर सेवाले सुरुवाती चरणदेखि नै विश्वास बढ्दै गएको हो।
अवार्ड दिने संस्थाले नर्भिकलाई ‘प्लेटिनम मेम्बर’ समेत प्रदान गरेको भनिएको छ। यो मेम्बर बन्नुको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा के रहन्छ?
कुनै पनि कम्पनीले धेरै विधामा अवार्ड जित्न सक्यो भने वल्र्डकबले एउटा सम्मानित पोजिसन दिने रहेछ। नर्भिकले हरेक वर्ष निरन्तर अवार्ड जितिरहेको छ। यसको प्रभाव निकै रहने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ। भोलि बाहिरी प्रविधि ल्याउनुपर्‍यो वा बाहिरी देशको अस्पतालसँग जोडिनुपर्‍यो भने हामीले राम्रो सहयोग पाउँछौं।
आम सर्वसाधारणको लागि नर्भिक महँगो छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?
यो बुझाइ गलत हो। बाहिरबाट हेर्दा मात्र त्यस्तो लागेको हो। सुरुमा नयाँ उपकरण भित्र्याउँदा केही महँगो त हुने भयो। डाक्टरहरूको शुल्क पनि महँगो थियो नै। तर, त्यति बेलाको इम्प्रेसन अझैसम्म छ। प्राइभेट अस्पतालसँग तुलना गर्ने हो भने नर्भिक कुनै पनि अस्पतालभन्दा महँगो छैन।
हामी गुणस्तर सेवा दिन्छौं। एमआरआई ल्यायौं नर्भिकमा। त्यो खासमा हामीले बिजनेसको मनसायले ल्याएका होइनौं। १.५ टेस्टलाई राख्दा पनि एमआरआई बिजनेसको हिसाबले ठिक थियो। करिब ३० करोडको त्यो उपकरणमा हामीले लगानी गर्‍यौं। नेपालीलाई राम्रो उपचार दिन सकौं भनेर हामीले गर्‍यौं। कतिपय उपकरण हामीले नोक्सान व्यहोरेरै ल्यायौं। त्यो केबल गुणस्तरीय उपचारको लागि
हामीसँग थुप्रै बेड छन्। जुन आम नेपालीको लागि नै छन्। त्यो कुरा मान्छेले बुझेका हुँदैनन्। सामान्य शुल्कमा हामीले थुप्रै सेवा दिइरहेका छौं। भित्रबाट हेर्ने हो भने जहाँ जनरल वार्डदेखि स्ट्यान्डर्ड वार्ड पनि छन्। सबैलाई सहज हुने गरी सरल मूल्यमा हामीले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौं
अस्पतालमा छुटको व्यवस्था कसरी गरिएको छ?
नेपाल सरकारको नियमानुसार हामीले छुटको व्यवस्था गरेका छौं। हामीले सिएसआर एक्टिभिटी छुट्टै गरिरहेका छौं। १० प्रतिशत बेड छुट्याएका छौं। उपचार गर्दा कुनै बिरामीको पैसा पुगेको हुँदैन। इमर्जेन्सीमा बिरामी आएको छ, पैसा नभएको अवस्था पनि हुन्छ। हरेक दिनजसो हुन्छ। यसलाई पनि हामीले केही व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं। पेसेन्टको बिल माफ गर्नेदेखि लिएर छुट दिने लगायतका व्यवस्थापन हामीले गरेका छौं।
एउटा अस्पतालले नसकेर अर्को अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्नुपर्ने अवस्था प्रायः आइरहेका हुन्छन्। यहाँ त्यस्तो अवस्था कत्तिको आउँछ?
हाम्रोमा त्यस्तो धेरै कम छ। बरु अर्कोबाट रेफर गरेर हाम्रोमा आएका केस थुप्रै छन्। तर, क्यान्सरमा हाम्रो ठूलो स्पेसलाइजेसन छैन। क्यान्सरका बिरामी हाम्रोमा आयो भने मेडिसिनल उपचार गर्छौं। यदि रेडियसन दिनुपर्ने भयो, हाम्रोमा सुविधा छैन भने अन्त रेफर गर्छौं।
लिभरमा समस्या छ र प्रत्यारोपण गर्नुपर्‍यो भने त्यो सुविधा हाम्रोमा छैन। हामीले रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रोभन्दा राम्रो उपचार अर्कोमा गर्छ भने बिरामीको स्वास्थ्यको लागि रेफर गर्छौं। तर हामीले प्रायः केसहरू ह्यान्डिल गरिरहेका नै छौं।
तपाईं नर्भिकमा आवद्ध रहनुभएको कति भयो?
१५ वर्ष भयो, म यहाँ आवद्ध भएको।
तपाईं नर्भिकमा रहेदेखि के परिवर्तन पाउनुभएको छ?
धेरै परिवर्तन पाएको छु। एक्लै त कहिल्यै सम्भव हुुँदैन। त्यतिबेला ५० बेड थियो। विस्तारै बेडहरू थप्दै गयौं। धेरै उपकरण पनि थप्यौं। म आउँदा नोक्सानमा नै चलिरहेका थियो। ती कुराहरूमा मेरा योगदान पनि रहे। अब हाम्रो फरक प्रदेशमा एउटा–एउटा अस्पताल खोल्ने सपना छ। रिहाब सेन्टर लगायत अल्टरनेटिभ मेडिसिनबाट उपचार गर्न सक्ने कुरामा हाम्रो प्रयास जारी छ। पछिल्लो समय धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ। हाम्रो टिमको अभ्यासलाई नै यो श्रेय दिनुपर्छ।
नर्भिक सुरु हुनुका पछाडि धेरै कथा छन्। आफ्नो आमाको उपचारमा हाम्रो चियरम्यान भारत जाँदा धेरै दुःख भोग्नुभयो। ‘म जत्तिको मान्छेलाई त यत्तिको कठिनाइ हुन्छ, आम मानिसलाई के होला’ भन्ने सोचेपछि उहाँले यो अस्पताल स्थापना गर्नुभयो।
हाम्रो यात्रा बेग्लै किसिमको छ। १ हजार मान्छेलाई नर्भिक अस्पतालले रोजगारी दिएको छ। पैसाभन्दा सेवा नै ठूलो धर्म हो भन्ने हामी ठान्छौं। हाम्रो यात्रा सामाजिक सेवा नै हो। सेवामुखी उद्देश्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होे। हामीले काम गर्दै सिकिरहेका छौं। हामीमा थुप्रै चुनौती छन्। त्यही चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदलेका छौं। धेरै प्रकिया इनोभेसन पनि गरेका छौं। अझै नयाँ र बिरामीलाई गुणस्तर सेवा दिने कुरामा हाम्रो अभ्यास जारी छ।
६. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कोभिड- १९ को प्रभाव
७. कोरोना तथा अन्य संक्रामक रोगको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखको स्वास्थ्य बिमा